थाहा खबर: जब देउवालाई कार्यकर्ताले र्‍याखर्‍याख्ती पारे...
जब देउवालाई कार्यकर्ताले र्‍याखर्‍याख्ती पारे...
नेपालगञ्ज : आधा खुला भएको भुइँतलाको सानो हलमा खचाखच कार्यकर्ता भरिएका थिए कांग्रेस बाँकेको पार्टी कार्यालयमा। सुरक्षाकर्मीलाई भीड मिलाउन हम्मेहम्मे थियो। पार्टी जिल्लासचिव कपिल शर्माले कार्यक्रम सुरु गरे। कार्यकर्तालाई जिज्ञासा राख्न भने। मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापति किरण कोइरालासँग कानमा खुसुक्क भन्दै थिए, ‘केको जिज्ञासा छ र ? ऐले ढिला हुन्छ ? ’ कोइरालाले राख्न दिऊँ भन्ने इशारा गरिन्।
लगत्तै भीडबाट एक जना कार्यकर्ता जुरुक्क उठे। ‘हामी पनि पार्टीमा लागेर जीवनै सक्किन लाग्यो, हाम्रो नामै सिफारिसमा परेन, टिकट वितरणमा रहेका मेरा भाइ उमेरका केन्द्रीय सदस्य किशोरसिंह राठौरले बरु मेरो उमेर सोध्नुभयो ? ’ बाँके क्षेत्र नं. ३ का ती कार्यकर्ता हरिभक्त उप्रेतीको रिस अझै सकिएको थिएन, ‘के हामी जिल्ला बस्नेहरूको पार्टीमा कुनै हैसियत छैन?’
उनलाई कार्यक्रम सञ्चालक जिल्लासचिव शर्माले जोडबल गरेर बसाउन खोजे पनि कार्यकर्ताले ‘हुटिङ’ नछाडेपछि बसाउन सकेनन्। तर, उनलाई जबर्जस्ती बस्न लगाइयो। अर्का कार्यकर्ता सोमबाहदुर थापा जुरुक्क उठेर एक्कासि कुर्लिए ‘सभापतिज्यू कहिलेसम्म हामीले तपाईंहरूको झोला बोकिरहने हो ? के तपाईंहरू मरेपछि मात्रै हाम्रो पालो आउने हो?’
उनले जिल्ला सभापति कोइरालाको नाम छुटेको बारेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्दै त्यसप्रति दुःख पनि व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी आ-आफू पार्टीभित्र पछि लडौंला, अहिले चुनावमा लडौं र कांग्रेसलाई जिताऔं।’ देउवाले कांग्रेसले हार्नु जनता, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हार्नु रहेको बताए।
वाम गठबन्धनले लोकतन्त्र सिध्याउन लागेको आरोप लगाउँदै देउवाले त्यसकाविरुद्ध फेरि लोकतन्त्रले जित्नुपर्ने बताए। ‘कांग्रेसले मात्रै लोकतन्त्र जोगाउन सक्छ, त्यसैले अहिले चुनावमा कांग्रेसलाई जिताउन लाग्नुस् हामीले जितेमात्रै लोकतन्त्र रहन्छ। हामी पनि रहन्छौं। नत्र हामी नै रहँदैनौं’ उनले भने।